DEG DEG:- Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo goordhaw aas-qaran loogu sameeyay Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo goordhaw aas-qaran loogu sameeyay Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa goor dhaw xarunta wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya ee magaalada Muqdisho aas-qaran loogu sameeyay Allaha u naxariistee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Jeneraal Maxamed Cali Samatar oo maanta meydkiisa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Waxaa aaska qaran ee Jeneraal Maxamed Cali Samatar kasoo qeyb galay madaxda sare ee dalka, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, qaar ka mid ah madaxda maamul goboledyada dalka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed.
Madaxdii ka qeyb-gashay aaskaas oo ka hadashay goobta ayaa dhamaantood sheegay in Marxuum Jeneraal Maxamed Cali Samatar uu dalka Soomaaliya kaga tagay taariikh aad u weyn islamarkaana uu qof weliba xasuusan doono.
Sidoo kale, waxay madaxdaasi sheegeen in Jeneraal Maxamed Cali Samatar uu ahaa geesi dalkiisa wax badan usoo qabtay islamarkaana ka qeyb qaatay dhisida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa tan iyo markii ay dhacday dowladii dhexe ee militeriga ahayd waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka, waxaana uu mudooyinkii dambe ku jiray isbitaal kadib markii uu la daalaa-dhacaayay xanuun muddo haayay.
Ugu dambeyntii, madaxda kasoo qeyb-gashay aaska madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee Maxamed Cali Samatar ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay u duceeyaan islamarkaana iska cafiyaan marxuumka oo maanta aaska qaran loogu sameeyay xarunta wasaaradda gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho.